Chonme, Jongmyo - Seoul
Asia ENingizimu Korea Seoul
Ikheli: 157 Jong-Ro, Jongno 1 (il) .2 (i) .3 (sam) .4 (sa), iJongno-gu, iSeoul, eNingizimu Korea
Ifoni: +82 2-765-0195
Usuku lokusungulwa: 14th c.
Idolobha elikhulu lase- Seoul liye laheha izivakashi zakwamanye amazwe ngesigqi esinamandla sokuphila nesiko langempela, esekelwe ekuhlanganisweni kwamasiko asendulo namasha. Akumangalisi ukuthi, edolobheni lapho abantu abangaba yizigidi ezingu-10 bahlala khona, kunezinkambo eziningi ezithule futhi ezizimele lapho ungajabulela ukuthula nokuthula.
Idolobha elikhulu lase- Seoul liye laheha izivakashi zakwamanye amazwe ngesigqi esinamandla sokuphila nesiko langempela, esekelwe ekuhlanganisweni kwamasiko asendulo namasha. Akumangalisi ukuthi, edolobheni lapho abantu abangaba yizigidi ezingu-10 bahlala khona, kunezinkambo eziningi ezithule futhi ezizimele lapho ungajabulela ukuthula nokuthula. Enye yezindawo ezinjalo yindawo ebaluleke kakhulu yomlando neyezenkolo yaseNingizimu Korea - indlu engcwele yeConme. Ake sixoxe kabanzi ngakho.
I-Chongmyo, engxenyeni eyinhloko yeSeoul, ingenye yezindawo ezingcwele zaseNingizimu Korea. Inhloso yokuqala yokudala ithempeli, eyasungulwa ekhulwini le-14 leminyaka elikude, kwakukhona ukuqhutshelwa kwamalungu asele ekhosini lobukhosi baseJoseph. Ukubaluleka kwalendawo kukhonjiswe nendawo yayo: indawo engcwele igubungulwe yiDaily Great Palaces. Eceleni kwayo kumelela i- Changyonggun Palace, kancane kancane eningizimu - i- Changdeokgun , ohlangothini lwasempumalanga - iGyeongbokgun , ukusuka eningizimu-ntshonalanga - iToksugun naseNyakatho - eGyeonghong .
Isakhiwo se-Chonme Sanctuary
Eyokuqala nangesikhathi esifanayo izakhiwo ezinkulu zendawo eyinkimbinkimbi zakhiwa ngo-Okthoba 1394, lapho uDaejon, inkosi yokuqala kaJoseon Dynasty, ehambisa inhloko-dolobha eya eSeoul. Khona-ke lesi sakhiwo sabhekwa njengenye yezona zide kunayo yonke izwekazikazi. IHholo elikhulu kunazo zonke, iJongjon, lahlukaniswa ngamakamelo angu-7 kubaphathi nabafazi babo. Eminyakeni eminingi kamuva isakhiwo sanda futhi sanda, futhi isibalo samakamelo kakade sifinyelele 20. Nakuba ithempeli labhujiswa ngenkathi Imda impi, ngawo-1600 iziphathimandla zibuyiselwe futhi, ngenxa yokuthi namuhla zonke izihambeli zingabona indlu enkulu yaseNingizimu Korea.
Kufanele kuqaphele ukuthi ngesikhathi sokubusa kweJoseon Dynasty zonke izindlu zamakhosi zazixhunyaniswa, khona-ke ama-colonizers aseJapane agweba umgwaqo phakathi kwabo. Kakade esikhathini sethu, kuhlelwe uhlelo lokubuyisela isakhiwo sangaphambili sesakhiwo esiyinkimbinkimbi, futhi maduze sizogcwaliseka.
Isitayela Jongmyo jeryeak
Okwamanje, endaweni yesethempelini, umkhuba wamandulo owaziwa ngokuthi uJongmyo jeryeak ubanjwe njalo ngonyaka, ngeSonto lokuqala likaMeyi. Lo mcimbi obaluleke kunazo zonke uhlanganisa izingoma nemidanso, futhi umculo, ngaphansi kwezinqubo ezenziwa ngawo, wavela ngesikhathi sikaKor (918-1392), amakhulu eminyaka ngaphambi komculo wamaBaroque eYurophu. Emculweni ungase uzwe imisindo yomoya ovuthayo nezinsimbi zomculo ezinezintambo, futhi inhlanganisela yabo enhle idala umculo ohle kakhulu futhi ohle kakhulu, ohambisana nomcimbi obaluleke kakhulu wezwe uJongmyo Jeryek.
Kukholelwa ukuthi izingoma ezinjalo zimema imimoya yehla ezulwini izokujabulela ukuphumelela kwamakhosi ekwakheni ubukhosi nokuvikela izwe, nokukhuthaza izingane ukuba zilandele izinyathelo zazo. Namuhla amalungu eRoyal Family Association uJeonju Yi aqhuba imicimbi yomculo nokudansa, emele abaculi abavela kwiNational Center yeKorea Traditional Performing Arts kanye nabadansi beGukaku National School.
Uzohlala kuphi eseduze?
Abaningi bokuqala-izivakashi, ukuhlela uhambo, zama ukubhuka igumbi kwelinye lala mahhotela eduze kwezinto ezibalulekile zezwe. Uma ufuna ukuhlala kwenye yamahhotela eduze nethempeli le-Chonmé, sincoma ukuthi unake izindawo ezilandelayo:
MayPlace Hotel - kusuka ku-85 $. ngosuku;
I-Makers Hotel - kusuka ku-80 USD;
I-Atrium - kusuka ku-78 cu;
Amare Hotel Jongno - kusuka ku-70 USD;
Ihhotela leCullinan - kusuka ku-50 у.е.
Yiya ezikhangisweni ezibalwe ohlwini lweMali kaZwelonke yaseKorea, ngezindlela eziningana:
Ngaphansi komgwaqo . Kufanele uhambe esiteshini se-Jongno Station 3-ga (isiteshi No. 130 somzila o-1, isiteshi No. 329 emigqa emi-3, isiteshi No. 534 somugqa 5).
Ngetekisi noma emotweni yangasese. Njengoba uJonme engxenyeni esemqoka yenhloko-dolobha, kuyoba lula ukuyithola ngezixhumanisi, ngisho noma uhamba okokuqala eSeoul .
I-Lotte World Tower
I-City Hall yaseSeoul
Isiqhingi sokufakelwa (Seoul)
Indlela yokukhetha ibhodi yepakethe efulethini - amathiphu awusizo wokuthenga okuphumelelayo
I-Leukoplakia yesifo somlomo wesibeletho
Ubisi wangaphambili nangemuva - ukuthi ungondla kanjani?
Utshani obunamagilebhisi ezinqolobaneni
Umculi we-Singer uhlukanisile nomyeni wakhe
Banana - izakhiwo eziwusizo
Umshini wokugeza ukucwilisa
Indlela yokuziphatha - iyini futhi yenziwa kanjani?
Ngabe umunwe ukugqoka indandatho?
Izingelosi noma izimpungushe? Amamodeli Imfihlo kaVictoria i-Gigi Hadid!
Ungaba kanjani ophelele?
Inyosi ekhanda nge-prunes
Isiketi esikhwele 2013
Kungcono nini ukuthenga ingubo yoboya?
Ubuhlobo bomzali wengane
Izindleko ngesitayela seChicago
U-Beyonce waya kumculo we-Broadway nomyeni wakhe futhi wabonisa isithombe esisha sakusihlwa